एमसीसीका कारण राजनीतिक दुर्घटनामा परे प्रचण्ड, अब के गर्छन ? — Imandarmedia.com
एमसीसीका कारण राजनीतिक दुर्घटनामा परे प्रचण्ड, अब के गर्छन ?
काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ठूलो दुर्घटनामा परेका छन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर देशलाई दुर्घटनाबाट बचाएको बताउने प्रचण्ड आफै ठूलो दुर्घटनामा परेका छन्।
प्रतिनिधीसभा संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र नेता नरायणकाजी श्रेष्ठ नयाँ पार्टी बनाउने तयारीमा जुटेपछि प्रचण्डसहित उनको पार्टी अर्को दुर्घटनामा पर्ने भएको छ।
नेता लिलामणी पोखरेलले यसअघि एमसीसी पास गरे पार्टी छाड्ने सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेका थिए। उनीसहित श्रेष्ठ र अरु केही नेता गम्भीर नैतिक संकटमा परेका छन्।
माओवादी केन्द्रलेनै एमसीसी पारित गराएपछि उनी नैतिक संकटमा परेका हुन्। एमसीसी विरुद्ध माओवादी केन्द्र भित्र बहस सुरुवात गराउँने जस पोखरेललाईनै जान्छ।
तत्कालिन नेकपाकै समय देखि पार्टी भित्रै एमसीसी विरोधी अभियान चलाएका पोखेरेल एमसीसीको सन्दर्भमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले गरेको एक निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट राख्ने एक मात्रै नेता थिए।
एमसीसी बारे सम्पुर्ण डकुमेन्ट सहित सार्वजनिक रुपमा क्याम्पेनिङ चलाइरहेका नेता पाखेरेल आफेनै पार्टी एमसीसीको पक्षमा पुगे पछि स्तब्ध भएका छन्। फेरि राज्नितिनै तरंगित भएको छ।
एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफीक रणनितीको अंगनै भएको र यो अमेरिकी सैन्य रणनितीनै भएको दाबी गर्दै आएका पोखरेलले माओवादी केन्द्रलेनै एमसीसी पारित गराए पछि विखलवन्दमा परेका छन्।
माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट मानिने पोखरेलले आफ्नो पार्टीले एमसीसी पारित गरेमा आफूले माओवादी केन्द्र परित्याग गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए।
एक टेलिभिजन सँगको अन्तर्वातामा पोखरेलले माओवादी केन्द्रले एमसीसी पारित गराए आफूले पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए।पोखरेलले माओवादीले एमसीसी पारित गराए पार्टी छोड्छु भनेर घोषणा गरेको क्लिप अहिले सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएको छ।
पैसाका लागी आमा बेच्नेहरुले मात्रै एमसीसी राम्रो भन्न सक्ने र एमसीसी बोक्नेहरु सबै साम्राज्यवादका दलाल हुन भनेर बोल्दै आएका पोखरेलले एमसीसी पारित भए पछि खासै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
एमसीसी पास भएको भोलिपल्ट दिनभर पोखरेल मोवाइलको स्विचअफ गरेर बसेका थिए। अहिले पनि मिडियामा बोल्नबाट टाढै बस्दै आएका उनको मोवाइल स्विच अन भए पनि फोन उठ्न छोडेको छ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य छैन भन्ने लाइनमा रहेका नेताहरु माओवादी केन्द्र बाट विद्रोह गर्ने मुडमा पुगेका छन्। लिलामणी सहित गिरिराजमणी पोखरेल,अन्जना विसूंखे लगायतका नेताहरु अब माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड सँग टासिँन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
स्रोतले अनुसार लिलामणी पोखरेलले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छिटो निर्णय गर्न सन्देश पठाएका छन्। सामुहिक बिद्रोह गर्न नसक्ने हो भने आफू एक्लै भए पनि माओवादी केन्द्रबाट अलग हुने सन्देश पोखरेलले श्रेष्ठलाई पठाएको बताइएको छ।
रोचक कुरा त के छ भने पोखरेलकै श्रीमती शशि श्रेष्ठ परमादेशबाट बनको देउवा सरकारको मन्त्री रहेकी छिन्। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले सम्म एमसीसीको बारेमा कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छैनन्।
समर्थन या विरोध कुनैमा पनि उनको आवाज सुनिएको छैन।तेस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले एमसीसी पास गरेर दिपावली गर्ने शासकहरुलाई देशबाट लखेट्ने उद्घोष गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ६ कम्युनिस्ट पार्टी र दुई मोर्चाले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाण्डले दिपावली गर्ने प्रचण्डसहित नेताहरुलाई लखेट्ने उद्घोष गरेका हुन्।
अबको आफूहरुको आन्दोलन भनेको एमसीसीलाई लागू गर्न नदिने भन्दै जबसम्म एमसीसी खारेज हुँदैन तबसम्म आफूहरुले एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन गरिरहने उद्घोष गरे।
रातारात गठबन्धनको नाममा, बहुमतको नाममा एमसीसी पास गरेर शेरबहादुर, प्रचण्डहरुले विगतका सबै राष्ट्रघातलाई माथ गर्ने राष्ट्रघाती कदम चालेको ठोकुवा गरे। एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट गम्भीर त छदैछ’ उनले भने,
त्यति मात्र होइन नेपाली जनताको स्वनिर्णयको अधिकारको विरुद्धमा यो धेरै खतरनाक छ, नेपालको आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, नेपालको समृद्ध विकासको विरुद्धमा पनि यो धेरै खतरनाक छ।
नेपाली जनताको खिलापमा छ यो भनेर हामी संघर्षमा छौँ। अहिले संघर्ष उत्कर्षतिर गइरहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि, स्वाभिमान गुम्नबाट बचाउन लागि एक पटक सबै नेपाली जनताहरु डटेर संघर्ष गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, नेपाली जनताले एमसीसी पास गरेका छैनन् अहिले पनि नेपाली जनता एमसीसी विरुद्धको संघर्षमा छ । जनता नै सर्वोच्च निकाय हो त्यसैले अन्तिम फैसला जनताले गर्छ।
संसदीय व्यवस्था जनताको व्यवस्था नभएपछि त्यो सर्वोच्च होइन त्यसैले यो देशको व्यवस्था भनेको दलाल पुजीपतिहरुको व्यवस्था हो यसको फैसला पनि दलाल पुजीपति वर्गको हितमा हुन्छ नेपाली जनताको हितमा हुँदैन।
उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो हितमा हुँदैन, त्यसैले एमसीसी नेपाली जनताले मान्ने छैन। अबको एमसीसी विरुद्धको संघर्ष भनेको लागू गर्न नदिने हो। संसदभित्र सिमित मान्छे पैसा खाएर गरेको हुन्छ ? ३ करोड नेपाली जनता छन्।
एमसीसी पास भयो सक्किगो भन्ने ठान्नु भएको छ! कहाँ लागू गर्नुहुन्छ शेरबहादुर जी, प्रचण्ड जी,बाबुराम जी‘ ? यै धर्तीमा! यो धर्तीमा नेपाली जनता छन्। ३ करोड नेपाली जनताको सामना गर्न सक्छनुहुन्छ ? विचार गर्नुहोला।
अमेरिकी साम्राज्यवादका कारण युक्रेनमा चर्किरहेको युद्धको उदाहरण दिदै उनले त्यहाँका शासक, राष्ट्रपतिका कारण युक्रेनी जनता जुन मार खेपिरहेका छन् त्यो मुर्खता नगर्न नेपाली शासक देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, ओली, बाबुरामको ध्यानाकर्षण गराए।
अबको आन्दोलन भनेको अमेरिकी एमसीसी विरुद्धको मोर्चा भएकाले सबै नेपाली जनता, देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले डटेर प्रतिवाद गर्ने र अमेरिका, एमसीसीलाई लखेटेरै छोड्ने दृढता व्यक्त गरे।